Ururka Samafalka ee Hayaat Women Trust ayaa waxay gaadhsiiyey deeq lacag ah qoysas dan yar ah oo haysta dad qaba xanuunada dhimirka + SAWIRO. |
Ururka Samafalka ee Hayaat Women Trust ayaa waxay gaadhsiiyey deeq lacag ah qoysas dan yar ah oo haysta dad qaba xanuunada dhimirka + SAWIRO.
Ururka Samafalka ee Hayaat Women Trust ee fadhigiisu yahay magaalada Cardiff ee UK ayaa waxa uu gaadhsiiyey deeq lacag ah qoysas dan yar ah oo ku dhaqan magaalada Hargeisa kuwaasoo haysta dad qaba xanuunada dhimirka.
Dadkan danyarta ah oo ku dhaqan xarumaha barakacayaasha ee Statehouse ka iyo Stadium, ayaa waxa haysta dhibaatooyin aad u daran oo dhinacyo fara badan leh,
Dadkan danyarta ah ayaa waxa ka mid ah qoysas haysta afar qof oo qaba xanuunada dhimirka, qoys ka kooban lix carruur ah iyo ayaydood iyo aabahood oo qaba xanuunada dhimirka, waxaa kale oo iyana ka mid ah saddex nin oo walaalo ah oo ilaahay xiskoodi ka qaaday kuwaasoo lahayn waalid iyo ehel kaga war haya xaaladooda halka ay ka caawiyaan isla markaana ka war hayaan jaararkoodu.
Si kastaba ha ahaatee waxa dadkan dan yarta ahi ay deeqdan lacagta ahi ay ugu beegan tay wakhti ay aad ugu baahi badan yihiin xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Qoysaskan dan yarta ah ee la gaadhsiiyey deeqdan lacagta ah ayaa waxa ay uga mahad celiyeen taageerada ururka Hayaat Women Trust iyo qurbajooga gacanta ka gaystay deeqdan lacagta ee ku dhaqan magaalada Cardiff.
Dhinaca kale gudida barakacayaasha labada xaafadoo ee Statehouse ka iyo Stadium ayaa waxa ay Iyana uga mahadceliyeen cid kasta oo hawshan gacan ka gaysatay in la soo xasuusto dadka dan yarta ah waxaanay ilaahay uga baryeen inuu miisaanka xasanaadka ugu biiriyo.
Labadan xaafadood ayaa waxay ay ka mid yihiin barakacayaasha ugu waawayn ee dalka halkaasoo ay ku dhaqan yihiin kumanaan qoysas oo dan yar ah, dad badan oo qaba xanuunada dhimirka kuwaasoo dhibaato badani haysato. Inta badan qoysaska dan yarta ah ayaa waxa ay ku nool yihiin buulal cooshado ah kuwaasoo ka samaysan maryo halka ay marar dhowra dab ku qabsaday oo qoysas badani ku guryo beeleen.
Marwo Caasha Xasan oo ka mid ah xubnaha ururka Hayaat Women Trust ayaa ka warantay ujeedada deeqdan lacageed, waxaanay sheegtay inaanay ahayn markii ugu horaysay ee ay deeqdan oo kale soo gaadhsiiyaan dad danyar ah, balse ay laba jeer oo hore ugu qaybiyeen deeq lacageed dad dan yar ah oo ku dhaqan magaalada Hargeisa, waxaanay balan qaaday inaanay noqon doonin markii ugu horaysay balse uu ururku joogtayn doono caawimada dadka danyarta ah. Waxa kale oo gacan ka gaystay hawsha ururka haweenka ee Guddoon gaadhi taanka dadka dan yarta ah ee ku dhaqan xarumaha barakacayaasha.
Deeqdan lacageed ayaan la gaadhsiin kaliya labadan xaafadood ee barkacayaasha balse waxa iyana lagu soo qaybiyey xaafado kala duwan oo ay ka mid yihiin Daami, dhowr qoys oo Burco ah iyo Gabiley ba kuwaasoo dhamaan ahaa qoysas dan yar ah oo hayta dad qaba xanuunada dhimirka.
Gabagabadii waxa la gudoonsiiyey deeqdan lacageed dadkan danyarta ah ee haysta dadka qaba xanuunada dhimirka, halka qoys kasta lagu booqday gurigooda si loogu kuur galo xaaladooda nololeed.